ICafé Society Flat - I-Airbnb
ICafé Society Flat
EKapa, eMzantsi Afrika
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDonna
Iflethi yasekhaya enebhedi ezi-2 embindini woluntu lweCafé, ephezu kweendawo zokutyela zasebusuku ezahlukeneyo ezingqonge ikori ezaliswe ngamanzi. Kufuphi no-N1, iindlela zewayini eDurbanville, iimizuzu engama-20 ukusuka eBlaauwberg beach naseStellenbosch, imizuzu engama-35 ukusuka kumbindi wesixeko saseKapa. Ilungele ikhefu elifutshane kude okanye uhlale xa uhamba / ukhenketha. Zonke izinto eziyimfuneko, i-wifi esisiseko (hayi ifayibha), ukusetyenziswa kwekhitshi kunye nempahla, ibhafu kunye neshawari, indawo yokuhlala yabucala.
Iflethi yasekhaya, esisiseko kodwa ikhululekile, ilungele ikhefu elifutshane. Amagumbi okulala amabini ahlukeneyo nabucala, aphambili anebhedi ezimbini kunye negumbi elincinci elinebhedi eyodwa.
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nebhafu kunye neshawa. Ikhitshi evulekileyo kunye negumbi lokuphumla elikhokelela kwi-balcony. Vala kwaye uhambe. Indawo yokupaka i-Undercover yemoto e-1, kufutshane ne-lift.
Umgangatho wesibini. Imbono ethandekayo yekwari ezaliswe ngamanzi, kuthe cwaka emini kodwa kuxakekile kwaye kungxola kancinci okanye 'buz' ngokuhlwa kude kube malunga nentsimbi ye-11pm.
Uzisole ukuba akukho TV, kunye ne-wifi ephantsi kuphela, ayifanelekanga ukusasazwa. Akukho mlilo uvuliweyo uvumelekileyo (akukho braai).
Ndihlala apha ngokusisigxina kunye neekati zam kodwa ndiza kushiya iindwendwe zibe nemfihlo ngelixa zindwendwela.
4.87 · Izimvo eziyi-149
Uluntu lweCafé = kunye nexesha lokufika ekhaya nge-11pm. Iindawo zokutyela zithe cwaka ngo-10pm. Iipatimenti kwikwari ezaliswe ngamanzi. Iintaka ezininzi, iidassies, indlela ethandekayo yothando yokuhambahamba equarry. Ukuba uyonwabela ubomi basebusuku, uya kuyonwabela le ndawo.
Ukudibana kunye nokubulisa, ndikushiye ube nemfihlo. Xa ufowuna - 10mins kude.